Iindaba - Siyavuyisana Nokwaziswa KweWebhusayithi yethu eNtsha yeNkampani
Siyavuyisana noKuqaliswa kweWebhusayithi yethu eNtsha
Okokuqala, enkosi ngononophelo lwexesha elide kunye nenkxaso kwi-Erbo Technology!
Uphuhliso loluntu luyanda, kwaye lonke uphuhliso luya kuzisa utshintsho olutsha kwintengiso. Njengoko iJamani icebisa ukuqhubeka nokwandisa inguquko yesine yemizi-mveliso (Icandelo le-4.0) ekhokelwa yimveliso ekrelekrele kwaye "i-Intanethi +" inyukela kwisicwangciso-qhinga sesizwe sokuphucula, iimfuno zabathengi ziya ngokuya zisiba ninzi, zinobunkunkqele, zinobukrelekrele kwaye ziveliswa yimizi-mveliso ekrelekrele. -Ukwamkelwa kwendlela yokuphuhliswa kwemizi-mveliso, kwaye ikwalikhrayitheriya yokugweba inqanaba lezemizi-mveliso lelizwe kunye nesizwe. Ke senze umjikelo omtsha wokuphuculwa kwemizi-mveliso, kwaye saqulunqa ukubekwa kwindawo entsha ye "smart mveliso", ezinikele ekuboneleleni abasebenzisi beshishini ngezisombululo ezikrelekrele ngakumbi ezinokubakho. Kwangelo xesha, ukubonelela abasebenzisi ngamava okukhangela asebenza ngokulula nangcono, emva kwexesha lokucwangcisa, ukwenza iinkqubo kunye nokuvavanya, iwebhusayithi esemthethweni ye-Erbo Technology ikwaziswa ngokusemthethweni namhlanje.
Iwebsite ibambelela kumxholo "wolwaneliseko lwabathengi njengeyona nto kugxilwe kuyo". Ngokwendlela ebekiweyo, iphepha lasekhaya linamacandelo ama-6 okuhamba, icandelo ngalinye linemisebenzi ecacileyo kunye nomxholo otyebileyo, ukuze ufumane imveliso kunye nenkonzo oyifunayo ngokukhawuleza;
Yamkela ulwimi olutsha loyilo kunye nesitayile sokubonakalayo sokubonelela ngombono ongcono wombono kunye nokukhangela Siyathemba ukuba utyelelo lwakho kunye nengqwalaselo ziyakuvumela iTongfa ihambe kunye nawe!